Planegbọ elu ndị njem dabara na Oke Osimiri Pasifik mgbe ọ na-achọ ịda na Petropavlovsk
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Russia » Planegbọ elu ndị njem dabara na Oke Osimiri Pasifik mgbe ọ na-achọ ịda na Petropavlovsk
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • News • Akụkọ na -agbasa Russia • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Kamchatka ụgbọ elu
N'ịbụ onye a maara dị ka Far East na Russia, ụgbọ elu ụgbọelu mpaghara dara na Western Pacific Ocean mgbe ọ na -agbada na Obodo Petropavlovsk nke Russia.
Flying na Far East Russia site na Petropavlovsk-Kamchatsky ruo Palana nwere ike bụrụ ihe na-egbu egbu maka ndị njem 23 na ndị ọrụ ụgbọ mmiri isii nke ụgbọ elu ụgbọ elu Kamchatka Airlines.
AN-26 kwụsịrị nkwurịta okwu tupu ya adaa wee daa na Oke Osimiri Pasifik.
Ndị ọrụ mberede nọ ebe ahụ na -achọ ndị lanarịrị na ihu igwe adịghị mma.
Ụgbọ mmiri nnapụta ndị Russia nọ ugbu a n'oké osimiri dị egwu nke Western Pacific Ocean n'ehihie Tuesday maka ndị lanarịrị n'ụgbọ elu Kamchatsky ụgbọ elu a. Achọpụtala akara sitere na igbe ojii.
N'ime mmadụ 29 nọ na bọọdụ ahụ bụ ụmụaka abụọ. Ọnọdụ ihu igwe siri ezigbo ike na mpaghara a, ọ nwere ike bụrụ na ọ kpatara ya.
Gọọmentị ime obodo kwuru na ụgbọ elu ahụ nwere asambodo ziri ezi nke ịbụ onye ruru eru na ndị ọrụ ụgbọ ahụ agafela nyocha ụgbọ elu.
A malitere ikpe mpụ na imebi iwu nchekwa okporo ụzọ yana ọrụ ụgbọ elu
Ndị ọrụ ụgbọelu ekwetabeghị na ihe mberede a mere
Kamchatka Airlines bụ ụgbọ elu Russia nke dị na ọdụ ụgbọ elu Petropavlovsk-Kamchatsky. Ụgbọ ala ahụ jiri ụgbọ elu turboprop na ngwa ahụ dị warara rụọ ọrụ akwụkwọ ikike.
Petropavlovsk-Kamchatskiy bụ obodo na nhazi, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, sayensị, na ọdịbendị nke Kamchatka Krai, Russia. Ndị bi na ya bụ 179,780. Obodo a maara nke ọma dị ka Petropavlovsk. A gbakwụnyere adjective Kamchatsky na aha gọọmentị na 1924.
Obodo a nwere ọmarịcha ọnọdụ na Avacha Bay ma nnukwu ugwu mgbawa na-eleghara ya anya ma nwee ogologo ahịrị nke ugwu kpuchiri elu ya.
Ozi ndị ọzọ na ụgbọelu na -akụka eTurboNews